JazzMyApp: New Apps Everyday! 1.14.0 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 1.14.0 လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
Application မ်ား လူမႈေရး JazzMyApp: New Apps Everyday!
JazzMyApp: New Apps Everyday! ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
JazzMyApp အံ့သြဖွယ် apps များနှင့်အတူနေ့စဉ်သင်အံ့သြသွားပါစို့။ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ကထွက်ကြိုးစားပါ။ ယနေ့ JazzMyApp Download နှင့်သင့်မိတ်ဆွေများကိုသူတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါမှမဟုတ်သူတို့ Play Store မှာထိပ် apps များကလုပ်မတိုင်မီစကားပြောရန်မတိုင်မီအကြီး apps များရှာဖွေတွေ့ရှိရန်စတင်ပါ။
သူတို့ဖြန့်ချိလျက်ရှိသောနေ့၌•ကြီးမားလူကြိုက်များ apps များ (Pokemon Go ကို Facebook ကနေအိမ်)
ကန့်သတ်အချိန်များအတွက်အခမဲ့သို့မဟုတ်လျှော့စျေးသွား•ဂရိတ် apps များ
•သင်, jazz ဒေါင်းလုတ်လုပ်မှတ်ချက်ပေးရန်သို့မဟုတ်မိတ်ဆွေများကိုလည်းသူတို့ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိကိုကူညီမျှဝေနိုင်ပါသည်ကြိုက်နှစ်သက်ကြောင်း apps များတွေ့ပြီဆိုတာနဲ့လက်ရှိဖြစ်ရပ်များသို့မဟုတ်ရာသီ (ဘတ်စကက်ဘောဗိုလ်လုပွဲစဉ်ကာလအတွင်း ESPN ScoreCenter, Yahoo Sportacular) ကိုသက်ဆိုင်ရာဖြစ်ကြောင်း Apps ကပ!
ကျွန်တော်တို့ကိုတုံ့ပြန်ချက် Give သို့မဟုတ်ထိတွေ့နေဖို့:
http://www.facebook.com/jazzmyapp: Facebook ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကိုလိုပဲ
Twitter ပေါ်တွင်ကျွန်တော်တို့ကိုလိုက်နာပါ: https://twitter.com/jazzmyapp
JazzMyApp: New Apps Everyday! အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
JazzMyApp: New Apps Everyday! အား အခ်က္ျပပါ
worldnull စတိုး 551 188.69k
JazzMyApp: New Apps Everyday! ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း JazzMyApp: New Apps Everyday! အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 1.14.0
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://www.jazzmyapp.com/tos/
လက်မှတ် SHA1: B5:E6:C1:EC:96:99:E4:13:D8:32:67:08:08:30:22:4D:EA:27:90:01
ထုတ်လုပ်သူ (CN): mobile9
အဖွဲ့အစည်း (O): mobile9
နယ်မြေ (L): Penang
ပြည်နယ်/မြို့တော် (ST): Penang
JazzMyApp: New Apps Everyday! APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ